मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)-दाम्पत्य जीवन`मा एकअर्कालाई सहयोग गर्दै दैनिकी सुखद तथा समृद्ध बनाउन सकिनेछ । पढाइले`खाइमा थोरै स`मय दिए पनि उत्कृष्ट नतिजा हात पार्न सकिनेछ । स्वास्थ्य सबल रहने हुँदा शरीरमा एक किसिम`को जोस जाँगर आउनेछ । मायाप्रेममा नजिकिने समय रहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि तथा अनलाइनबाट सप्लाई हुने सा`मानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । बृष (ई, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो)-पढाइलेखाइमा प्रतिस्पर्धी`हरूलार्ई हराउँदै नतिजा तपाईं आफ्नै पोल्टो|मा पार्न सकिनेछ । शत्रु परास्त हुनेछन् भने तपाईंको खैरो खन्नेहरू आफै साइड लाग्नेछन् । विवादित विषयहरूको निर्णय तपाईं आफ्नै पक्षमा आउने हुनाले खुसीले उचाइ नाघ्नेछ । पुराना सापटी तथा लेनदेन`का मुद्दाहरू सल्टाउन सकिने हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ । माया गरेको मानिसबाट उप|हार प्राप्तिको योग रहेको छ । मिथुन (का, की, कु, घ, ङ,
मेष –चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) -काममा अनयासै हस्तक्षेप गर्नेहरू`लाई किनारा लगाउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ । अदाल`ती नि`र्णयहरू तपाईंकै पक्षमा आउनेछन् भने विवा`दित विषयहरू आफ्नै पक्षमा फैसला गराउन सकिनेछ । अध्ययनमा प्रगति भई भनेजस्तो नतिजा हात लगाउन सकि`नेछ । प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसि`लो हुनुको साथै जीवन साथीको हरेक पाइलामा समर्थन पाइने योग रहेको छ । बृष (इ, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो)- पढाइ लेखाइमा मन जाने हुनाले प्रतिस्पर्धी`हरूलार्ई पछि छोड्दै एक कदम अगाडि बढ्न सकिनेछ । माया प्रेमका कोपिला`हरू फक्रिएर जानेछन् भने नयाँ ठाउँबाट प्रेम प्रस्ताव आउनेछ । दैनिक उप`भोग्य वस्तु, औषधि तथा अनलाइन`बाट सप्लाई हुने सामान`को व्यापार व्याव`साय फस्टाएर जानेछ । पदिय दायित्व बढ्ने तथा काम गर्ने ठाउँमा तपाईंको काम गर्ने शैलीको धेरैले प्रशंसा गर्नेछन् । मिथुन (का, की, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा)-
तपाईंको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नु`होस् आजको राशिफल
मेष राशि - महत्वपूर्णकार्य सम्पादन गर्न पारीवारिक साथ सहयोग प्राप्त रहनेछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । कार्यक्षेत्रमा लगाईएको लगन सिलताको कदर हुनेछ । भुमि तथा वाहान शुख प्राप्त रहनेछ । पूराना मित्रजन`हरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । बृष राशि - प्रतिपक्षीहरु कमजोर रहनाले कार्य सहज बन्नेछ । तपाईको कार्य सम्पादनको श्रेय अन्य ब्यत्तिहरुलाई स`हजै प्राप्त हुनेछ । मित्रजनहरुको साथ सहयो`गमा सामान्य यात्राको सम्भाबना रहेता पनि यात्रा झन्झट पुर्ण रहन सक्नेछ । काम गर्दा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला सामान्य अप्जस आईपर्न सक्नेछ । मीथुन राशि - स्वास्थ सम्बन्धि समस्या`|गकोसताउन सक्छ । सामान्य चोट पटक आईपर्नेछ । खराब संगतका कारण सामान्य समस्या आइपर्न सक्नेछ । समयको स`हि सदुपयोग गर्न नसक्नाले कार्य क्षेत्रमा साधारण ढिलाई भोग्नु पर्नेछ ।
आज वैशाख २७ गते सोमबारको राशिफल हेर्दै दिनको सुरुवात गर्नु`होस्….
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । नयाँकार्य थालनिको योग रहेकोछ । सामाजिक कार्यमा सहभागी|ता जनाउने समय रहेकोछ । ब्यपार ब्यव`सायमा समय उत्तम रहनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार रहनेछ । प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा समय उत्तम रहेकोछ । अधुराका|र्यहरु सुचारु गर्न समयले बिशेष साथ दिनेछ । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) खराब संग`तका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । प्रतिपक्षीहरु सबल रहनाले कार्य सम्पादनमा साब|धान रहनु होला । मनोरञ्जन मुलक सरसामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आ`र्थीक झमेला`मा फस्न सकिने सम्भाबना रहेको|छ । सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ने दिन रहेकोछ । मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) प्रतिस्पर्दा`मा अबल रहीनेछ । आय मुलक का`र्यको थालनि हुनेछ । नयाँ कार्यको था
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा समय उत्तम रहेकोछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । नयाँ कार्य थालनिको योग रहेकोछ । मध्यान्न पश्चात सामाजिक कार्यमा सहभागीता जनाउने समय रहेकोछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार रहनेछ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) खराब संगतका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । मनोरञ्जन मुलक सरसामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । तात्का`लिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सा`मना गर्नु पर्ला । सामान्य कार्यमा धेरै स`मय र श्रम खर्चनु पर्ला । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ सजग रहनु होला । मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । पुरानो लगा`नि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । मित्र जनको साथ स|हयोग बाट क
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) व्यापार व्या`वसाय फस्टाएर जाने हुनाले मनग्गे धन सम्पत्ति जोड्न सकिनेछ । विलाशी तथा भौतिक सम्पतीको प्रयोग गर्न पाइने हुनाले अरुको मन आफू`तिर लोभ्याउन सकिनेछ । माया प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ भने पति पत्नी बीच विश्वासको वाता`वरण मजबुत हुनेछ । अध्ययन अध्यापनमा अरुभन्दा एक कदम अगाडी बढी नतिजा आफैतिर ल्या`उन सकि`नेछ । बिहानको समयमा लामो दुरिको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको योग रहेकोछ । वृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) बिहा`नको समय राम्रो रहेकोले माया प्रेमको बन्धन कसिलो हुनुको साथै दाम्पत्य जीबन सुखि हुनेछ । व्यापार व्यावसाय|बाट प्रशस्त आम्दानी हुनेछ । खनिज पदार्थसँग सम्बन्धित बस्तुहरु जस्तै धातु तथा पानी`सँग सम्बन्धित बस्तु`हरुको कारोबारबाट फाईदा हुनेछ । दाजुभाई तथा आफन्तजनबाट आर्थिक सह|योग प्राप्त हुनेछ । मध्यान्हबाट लामो दुरिको यात्रा हुनेछ भने विदेशमा बसेर काम
मेष - मुद्दामामिला तथा न्या'यिक निकायबाट हुने निर्णयहरु पछिको लागि सार्नु नै उपयुक्त हुनेछ किनकी आज आउने फैसला तपाईंको पक्षमा हुनेछैन । व्यापार व्यावसायमा समय दिएपनि आम्दानी कम हुनेछ । खर्च बढ्नाले आर्थिक व्यवस्थापन गर्न असजिलो हुनेछ । नोकरी तथा पढाइमा हुने प्रतिस्पर्धामा वि'जय हुन कडा मिहिने'त गर्नुपर्नेछ । पुराना समस्या पुनः बल्झन सक्छ वा ऋण लाग्नेछ, ध्यान दिनुहोला । खानपानमा ध्यान दिनुहोला, स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउन सक्छ । वृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) व्यापार व्यावसायमा सन्तोषजनक फाइदा हुनेछ । विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउन अलि बढि नै संघर्ष गर्नुपर्नेछ । मायाप्रेम'मा धोका हुन सक्छ भने एकोहोरो मा'या प्रेमले सताउनेछ । सन्तान तथा छोरा छोरीबाट तपाईंको काममा सहयो'ग हुने छैन । वौद्धिक कार्यमा सह'भागी भई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने सोचेजस्तो पारिश्रमिक न
मेष - पारिवारिक वाता'वरण तपाईंको अनुकूल नभए पनि नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने धन आर्जन हुनेछ। बेसु'रमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्नेछ। शरीरमा उत्साह र उमङ्ग प्राप्त हुनेछ । स्वास्थ्य सबल रहनेछ र काममा पनि फाइदाको योग छ । चिताएको काममा सोचेजस्तै सफ'लता मिल्नेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। व्यव'सायको लगानीले मनग्गे ध'नलाभ हुनेछ। आलस्य त्यागेर मिहिनेत गर्नुपर्ने समय छ। प्रतिस्पर्धीहरूले समेत सहयोगका हात फैला'उनेछन्। नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। बृष - परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी ग'रेमा अझ राम्रो हुनेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् । कसैसंग सामान्य विवाद पनि हुन सक्छ । अध्ययनमा प्र:गति हुनेछ । लगनशीलताले संकल्प पूरा गर्न सकिनेछ। कमजोर नतिजा सच्याउन केही काम दोहोर्या'उनुपरे पनि मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिला'उनेछ । आलोचकहरूले समेत प्रशंसा गर्न थाल्नेछन्। प्रेम र मित्र:ताको बन्ध
मेष (चू, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आमा तथा आमा सरहका मानिस'सँग वि'वाद बढ्ने योग रहेको छ । छाती सम्बन्धी सामान्य समस्या आउन सक्छ । ख्याल गर्नुहो'ला । प्रतिस्पर्धी-हरुले काममा अ'वरोध पु¥याउन सक्छन्, ध्यान दिनुहोला । अध्ययन तथा अध्यापनमा तपाईं आफ्नै का'रणले पछि पर्नुहुनेछ । व्यापार व्याव-सायमा प्रशस्त समय दिनुपर्नेछ भने कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । आत्मीय साथी तथा आफन्त'सँग मनमु'टाव बढ्ने योग रहेको छ । वृष (ई, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो) दाजु-भाइ तथा छिमेकीसँग सामान्य कुरामा मनमुटाव सिर्जना हुनेछ । छोटो यात्रा हुने भए पनि यात्राका क्रममा विभिन्न बाधा अव'रोधको सामना गर्नुपर्नेछ । न्यायालय'बाट हुने न्या'यिक निर्णयहरु तपार्इंको पक्षमा नहुने हुनाले आज मुद्दा मामिलामा सामेल नहुनुहोला । माया प्रेममा धोका तथा विश्वास घात हुन सक्छ, ध्यान दिनुहोला । उद्योग तथा व्याव'सायमा लगानी
ग्रह राशी अनुसार तपाईंको आजको दिन कस्तो रहन्छ ? हेर्नुहोस् तपाईंको राशिफल
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ)दाजुभाई तथा छिमेकिबाट तपार्ईँले शुरु गरेको काममा सहयोग तथा सम-र्थन हुने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । छोटो दुरिको व्याव-सायिक यात्राको अधिक सम्भावना रहेकोछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले थप लगानी गर्न आट आउनेछ । माया-प्रेममा एक अर्काको भावना बुझ्न सकि'ने हुँदा थप प्रगाडता बढेर जानेछ । पढाइ लेखाइ प्रगतिकै बाटोमा अगाडी बढ्ने योग रहेकोछ । बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) माया प्रेममा सामि'प्यता बढ्नेछ भने पति पत्नी बीच मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ । साथिभाई सँगको रमाईलो बसाईमा स्वादिष्ट भोज'नका साथ समय व्यातित गर्न सकिनेछ । प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरुलाई अरु-लाई हराउदै अगाडि बढ्न सकिनेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा प्रगती भएर जानेछ । पुराना आर्थिक मुद्दाहरु हल भएर जाने हुनाले थप लगानी गर्ने वातावरण बनेर जानेछ । मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा)मानसम्मान तथा इज्जत प